Nhau - PTFE Plastiki Kuwedzeredza Muchina Kuisa - Yekubudirira Kesi
PTFE Plastiki Kuwedzera Mashini Kuisa - Yekubudirira Kesi
PTFE Plastiki Tube Ram Extruder inonyatso kuita komputa uye zviri nyore kubata. Iyo inoshanda zvakanyanya mushandisi-inoshamwaridzika kwete chete inochengetedza iyo mari uye nguva panguva yekugadzirisa, asi zvakanyanya simbisa kuchengetedzeka kwevashandi.
SUNKOO Machine Tech Co., Ltd iri nyanzvi PTFE & UHMWPE michina tsvakurudzo, gadzira uye okutengesa sezvo mumwe ano zvebhizimisi. Uye semugadziri anotungamira mune ino ndima, SUNKOO yakagadzira hukama hwakanaka hwekudyidzana nemakambani mazhinji epamba nekune dzimwe nyika pamusoro pemakore nehunhu hwayo hwekutanga-kirasi, tekinoroji yepamusoro uye nebasa rekuchenjera. Wedu mainjiniya akashanyira USA kubatsira mutengi ikoko kuisa, komisheni michina uye kupa kudzidziswa kwekushanda uye kugadzirisa.
PTFE Tube Ram Extruder, iyo michina yanga ichizogadziriswa, ndicho chinhu chakakosha cheSUNKOO. Yepamberi yakagadzirirwa, inogona kuchengeta yakatsiga gondohwe kumhanya uye inoburitsa chaiwo mhando PTFE Tube zvigadzirwa neyedu yekutanga tekinoroji. Muchina uyu unokodzera zvese zvitsva PTFE zvinhu uye zvekare zvekare. Kunze kwezvo, iyo yakakura dhayamita inogona kugutsa vatengi 'chaiwo zvirevo. Iine zvakanakira yakakwira goho uye yakaderera simba rekushandisa, SUNKOO yakabudirira kuvhura musika wayo kuUSA, UAE, Korea, India, Russia, Malaysia, nezvimwewo uye yakawana mukurumbira wakanaka pakati pevatengi.
Post nguva: Chivabvu-24-2020